रक्तचन्दनको कारोबार बन्द भएकै हो त ? – Newsviewsnepal.com
२०७४ फाल्गुन ६, आइतवार
रक्तचन्दनको कारोबार बन्द भएकै हो त ?
By newsview	 On Jan 28, 2018
बनेपा, १४ माघ । बहुचर्चित रक्तचन्दनको नाम आजकल सुन्न छाडेपनि अहिले पनि आम जनतामा जिज्ञासा छ, यसको अवैध कारोबार बन्द भएको हो त रु रक्तचन्दनबारे स्थानीय प्रशासन र प्रहरीको आ–आफ्नै तर्क छ ।
सिन्धुपाल्चोकको तातोपानी नाकाबाट नेपाल भित्रिने रक्तचन्दन अरनिको राजमार्ग हँुदै काठमाडौँं प्रवेश गर्न लाग्दा धेरै पटक प्रहरीले पक्राउ गरेपनि केही वर्षयता यसको अवैध कारोबार भए नभएको बारे प्रहरी समेत अनविज्ञ छ ।
केही वर्षअघि रक्तचन्दनको अवैध ओसारपसार हुँदा प्रहरीले काभ्रेपलाञ्चोकको पाँचखाल, दोलालघाट, उग्रचण्डीनाला, धुलिखेल लगायतका क्षेत्रबाट विभिन्न व्यक्तिलाई पक्राउ गरेको थियो । सिन्धुपाल्चोकको विभिन्न ठाउँबाट रक्तचन्दन बरामत हुनुका साथै तस्कर समेत समातिएका थिए ।
काभ्रेपलाञ्चोकका प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवप्रसाद सिंम्खडाले सिन्धुपाल्चोकको तातोपानी नाका अवरुद्ध भएको र चीनमा पनि उत्पादन शुरु भएका कारण यसको कारोबार नभएको अनुमान लगाउनुहुन्छ ।
उहाँ भन्नुहुन्छ – “सुनको अवैध कारोबार फाट्टफूट्ट सुनिन्छ तर यसको कारोबार सुन्नमा आएको छैन ।”
रक्तचन्दनमा धेरै कडाइ भएपछि तस्करले शैलीपरिवर्तन गरेर रक्तचन्दनको तेलको अवैध धन्दा पनि चलाएका थिए । काठमाडौंँमा केही वर्षअघि ९० लिटर रक्तचन्दनको तेलसहित केही व्यक्ति फेला परेपछि तेलको पनि कारोबार भएको कुरा खुलेको थियो ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायब उपरीक्षक महेन्द्र मरासिनीले चीनको मुख्य नाका तातोपानी बन्द भएका कारण रक्तचन्दको कारोबार नभएको हुनसक्ने आशंका गर्नुहुन्छ ।
रक्तचन्दन साइटिस सन्धिको अनुसूची– २ मा सूचीकृत छ । अनुसूची–२ मा सूचीकृत भएकाले व्यापार– व्यवसाय गर्न पाइने भए पनि भारत सरकारले व्यापार– व्यवसायमा पूर्णरुपले प्रतिबन्ध लगाएको छ । सन्धि बमोजिम बरामद भएका वस्तु जुन देशमा उत्पादन भएको सोही ठाउँमा पठाउनुपर्ने कानूनी प्रावधान छ । चीनमा रक्तचन्दनको मूल्य प्रतिकेजी रु १६ हजारसम्मपर्छ ।
सिन्धुपाल्चोकमा रहेर पत्रकारिता गरिरहेका पत्रकार दिनेश थापा रक्तचन्दनको अवैध कारोबार गर्ने व्यक्तिले भारतबाट नै कारोबार गरेका कारण नेपालमा यसको नाम कम सुनिएको जानकारी दिँदै तातोपानी नाका बन्द भएपछि कारोबार नभएको बताउनुहुन्छ ।
नाका केही समय खुल्दा फाट्टफूट्ट कारोबार समेत भएको उल्लेख गर्दै उहाँ भन्नुहुन्छ, रसुवा नाकाबाट रक्तचन्दनको कारोबार सम्भव नभएकाले तस्करले भारतबाट नै रक्तचन्दन चीन पठाउछन् ।
काभ्रेपलाञ्चोक क्षेत्रबाट केही वर्षअघि झण्डै ९०० किलो अवैध रक्तचन्दन बरामद भएको जिल्ला वन कार्यालयका अधिकृत अर्जुन खड्का जानकारी दिनुहुन्छ । उहाँका अनुसार बरामद भएका सबै रक्तचन्दन वन विभागलाई बुझाइएको र रक्तचन्दनको अवैध ओसारपसार सम्बन्धी– ८ वटा मुद्दा दायर भएकोे छ ।
सल्यान-काठमाडौँ मञ्चको अध्यक्षमा नबिन बुढाथोकी
भट्टराईले दिए कालोमोसो दल्ने चेतावनी
विप्लव माओवादीको कार्यक्रममा प्रहरी हस्तक्षेप, दर्जनौ नेता कार्यकर्ता पक्राउ
के भयोओली र प्रचण्डबीच डेढ घण्टा लामो भेटवार्तामा ?
काठमाडौंको लगनमा आगलागी, एकको मृत्यु
आज सूर्य ग्रहण!! कुन राशीलाई के फाईदा ?
प्रधानमन्त्री देउवाले दिए राजीनामा
पशुपतिमा नागा बाबामाथि आक्रमण, २ घाइते
को को परे माओवादीबाट समानुपातिकमा ?
नेपाली तथा भारतीय नक्कली रुपैयाँसहित दुई युवक पक्राउ
नागा बाबाविरुद्ध अदालतमा पर्यो मुद्धा
नुवाकोट जिल्ला दमकल सेवाविहीन
त्रिशुली दुर्घटना अपडेटः सिचाइ सचिवको शब भेटियो, अन्य २ जनाको अवस्था अझै अज्ञात
प्रदेश ३ को मुख्य मन्त्रीमा पौडेल
अर्थमन्त्री कार्की र भिम रावलबीच झण्डै कुटाकुट
प्रदेश ३ मा को बन्दैछ मुख्यमन्त्री?
राजस्व अनुसन्धान प्रमुख र तस्करबीच यस्तो साँठगाठ !! सुन तस्कर छुटाउन विरामी भएको वाहाना !!
सिरकभित्र निसास्सिएर बालकको मृत्यु
किन सुरु हुन सकेन सगरमाथाको उचाइ नाप्ने काम?
एमाले- माओवादी एकता सरकार गठनपछि
को को परे राष्ट्रिय सभामा कांग्रेसबाट ?
राष्ट्रियसभा सदस्यको मत परिणाम सार्वजनिक
राष्ट्रियसभाको मतदान शुरु
‘हरेक दिन एक नयाँ काम’
प्रदेश सांसद भाडाको घरमा नबस्ने
को हुदैछ प्रदेश नं १ मा एमाले संसदीय दलको नेता ?
नम्बरप्लेट देख्दा झुक्किने यी कस्ता ट्राफिक ?
प्रदेश २ को पहिलो बैठकमै हंगामा, संसद सुरु हुनासाथ अवरुद्ध
यस्तो भद्रगोलमा प्रदेशसभाको पहिलो बैठक !
यस कारण हुन्छ क्यान्सर, बच्न यसो गरौं
जिल्ला प्रशासनमै भेटियो नक्कली नोट